Alloow Roob Iyo Rays: Faalada Warka « HiilDan.Com
Home › Faalada Warka (News Analysis) › Alloow Roob Iyo Rays: Faalada Warka
Alloow Roob Iyo Rays: Faalada Warka By hiildan on January 21, 2008	• ( 0 )
“Roobkii xayska oo dhawrkii maalmood ee u dambeeyay si is daba joog ah uga da,ayay degmada Baki iyo nawaxiga xeebta G/awdal ayaa gaystay khasaare balaadhan oo ah dhimashada in ka badan 7170 neef oo xoolo ah iyo ilaa sideed guri oo dumay inta la ogyahay”. Sidaasi waxa warkiisa ku bilaabay oo uguna soo gudbiyay BoramaNews, wariye Cabdiraxmaan Maxamad Habbane . Dhawaan ayay ahayd markii aynu qaylo dhaanta Abaarta isku dirnay. Dhawaaqii dhalaanka, danyarta, iyo maataduna kuma dhicin cidlo, ee Ilaahay wuu dhagaystay, wuxuna ugu jawaabay dhibic roobaad oo aad u dhumuc weyn. Khasaare dad iyo duunyaba leh ayaa durba laga soo werinayaa inay roobabkaasi geysteen. Waxasne Ilaahay ka baryaynaa inuu ku xijisiin doonno, rays iyo barwaaaqo oo lagu reeyo waligeedba
Gurmadka Mayorka Baki ka codsaday dawladda Somaliland iyo Hayadaha gargaarka inay soo gaadhsiiyaan dadka iyo duunyada ku le’day roobabka danbe, waa mid isna loo baahanyahay in wax weyn laga qabto. Awel hore Hadday dadka abaari laynaysay, imikana barwaaqaa timid, ee halla soo dhaweeyo barwaaqada. Dadkay waxyeelo u gaystay barwaaqaduna, waxa laga heli doonaa barwaaqee, haloogu gurmado, bash-bash iyo barwaaqo, oo si buuran halloo caawiyo. Alloow Roob iyo Rays, mid lagu reeyo noo keen. HiilDan
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Jawaab: Lughaya News iyo Su’aasha TodobaadkaAwdal Ma Dooran; Guddoomiyaha Awdal »Categories: Faalada Warka (News Analysis)Tags: Faalada Warka (News Analysis)	Related Articles
Blog Stats	1,213,996 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)
SOMALILAND (SNM)..WAA KUWAN SIDA FIINTA UGA QAYLYEY GUDIGII GOGOL XAADHKA EEN DHAMEYSTIRNEYN EE, MAXAY YEELI DOONAAN MARKA LA DHAMEYSTIRO?....